फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ को ‘मेरो माया के हो ? - Sunkesari
फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ को ‘मेरो माया के हो ?
August 11, 2019 August 11, 2019 sunkesari Entertainment
निर्देशक अशोक शर्मा निर्देशित फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । राजधानी एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको ‘मेरो माया के हो ?’ बोलको गीतमा फिल्मका प्रमुख अभिनेता अंकित शर्मा र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह फिचर्ड छन् । बसन्त श्रेष्ठ गीतको भिडियोका कोरियोग्राफर हुन् ।
निशान भट्टराई र अस्मिता अधिकारीको संयुक्त गायन रहेको गीतमा कल्याण सिंहको संगीत छ । गीतको शब्द रवि मल्लले सिर्जेका हुन् ।
निर्देशक शर्माले फिल्मलाई उत्कृष्ट बनाउन आफूले कुनै प्रयास बाँकी नराखेको बताए । यो फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा अभिनय गरेका अंकित उनकै छोरा हुन् । अंकितले फिल्ममा आफूले पाएको भूमिकालाई न्याय गर्ने प्रयत्न गरेको बताए । यसअघि उनले फिल्म ‘जय भोले’ मा सहायक निर्देशक भएर काम गरेका थिए । अभिनेत्री साम्राज्ञीले फिल्ममा फरक भूमिका निभाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।
फिल्मका गीतमा प्रमोद खरेल, मेलिना राई, निशान भट्टराई र अस्मिता अधिकारीले आवाज भरेका छन् । फिल्मका लागि सहदेव ढुंगाना, डा.कृष्णहरि बराल र रवि. मल्लले गीत लेखेका छन् । निर्देशक शर्माकी छोरी कृति फिल्मकी सहायक निर्देशक हुन् । मित्र देव गुरुङको काँधमा सम्पादनको जिम्मेवारी छ । कार्यक्रममा कलाकार राजारामले अंकितको प्रशंसा गर्दै भविष्य सुन्दर रहेको बताए ।
जय देवकोटाको बर्खा २ लोकप्रीय बन्दै